Myanma Insurance | Ministry of Finance
myanma insurance is for the people
မြန်မာ့အာမခံ၏ မျှော်ရည် သုံးသပ်ချက်
သဘာဝဘေးအန္တရာယ်နှင့် လူသားတို့၏ အမှားကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး နစ်နာဆုံးရှုံးမှုများ လျော့နည်း ပပျောက်ရေးအတွက် ပြည်သူပြည်သားများ အာမခံထားခြင်းခြင့် ကြိုတင်ကာကွယ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
မြန်မာ့ အာမခံ၏ ခံယူချက်
လူသားတို့၏ အမှားကြောင့်လည်းကောင်း၊ သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်ကြောင့်လည်းကောင်း၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး အရ နစ်နာဆုံးရုံးမှုများကို ရင်းစားပြန်လည် ရရှိစေနိုင်သည့် ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေ စီမံခန့်ခွဲမှု နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သော အာမခံလုပ်ငန်းဖြင့် ပြည်သူများအား အကာအကွယ် ပြုသွားရန် အစဉ်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေမည်။
Credit Guarantee Insurance လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲကျင်းပခြင်း
Credit Guarantee Insurance လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲကို (၁၇.၁၁.၂၀၁၇) ရက်နေ့ နေ့လည်(၂:၀၀)နာရီတွင် မြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်း(ရုံးချုပ်)၌ ကျင်းပခဲ့ပါသည်။
ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲသို့ မြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်းမှ ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးနှင့် အရာရှိများ၊ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်၊ ငွေရေးကြေးရေးကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေး ဦးစီးဌာန၊ စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊ မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်၊ မြန်မာ့ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဘဏ်၊ မြန်မာ့လယ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်မှ အရာရှိကြီးများ၊ JICAနှင့် SMBC မှ တာဝန်ရှိသူများ၊ ပုဂ္ဂလိကဘဏ်များအားလုံးမှ တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
မြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်း၊ ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးမှ အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြား၍ လက်ရှိချေးငွေအာမခံလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေမှု အခြေအနေများကို ရှင်းလင်းပြောကြားပြီး ချေးငွေအာမခံလုပ်ငန်း ဆက်လက်ကျယ်ပြန့်လာစေရန်အတွက် တက်ရောက်လာကြသူများမှ ဆွေးနွေးကြပါသည်။
တက်ရောက်လာကြသူများမှ အဓိကဆွေးနွေးချက်များမှာ ဘဏ်များ၏ SME ချေးငွေများ ချေးနိုင်ရန်အတွက် ဘဏ်အချို့မှ Deposit အခက်အခဲရှိကြောင်း၊ Two Step Loan ရယူရန်အတွက် Criteria များဖြေလျှော့ပေးစေလိုကြောင်း၊ CGI လျှောက်ထားမှုအတွက် Document Process အချို့ကို ဖြေလျော့ပေးရန် လိုအပ်ကြောင်း၊ SME များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် ဦးစားပေးကဏ္ဍများ သတ်မှတ်ပေးရန်လိုအပ်သကဲ့သို့ စျေးကွက်ရှာဖွေပေးရန်လည်း လိုအပ်ပါကြောင်း တင်ပြကြပါသည်။
မြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်း၊ ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးမှ ချေးငွေသက်တမ်း (၁)နှစ် အထက် ထားရှိခြင်းအတွက် Reducing Method ဖြင့် Premium နှုန်း ဖြေလျော့ပေးခြင်း၊ လုပ်ငန်းအစက Pilot Project တိုင်းဒေသကြီး(၃)ခုဖြင့်သာ စတင်လုပ်ဆောင်သော်လည်း ယခုအခါတိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်များအားလုံးတွင် ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရန် မြန်မာအာမခံလုပ်ငန်းရုံးခွဲများမှ ဆောင်ရွက်ပေးနေခြင်း၊ အချိန်တိုအတွင်း (အများဆုံး ၁၀ ရက်)ဖြင့် ပြီးစီးအောင် ဆောင်ရွက်ပေးနေခြင်း စသည်တို့ကို ဖြေလျော့ပေးပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ ဆွေးနွေးပွဲမှ သိရှိရသည့် ဆောင်ရွက်ရန် ကိစ္စများကို သက်ဆိုင်ရာဌာနများနှင့် အမြန်ဆုံး ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍအပါအဝင် SME ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် Credit Guarantee Corporation Law စတင်ရေးဆွဲနေပြီဖြစ်ပါကြောင်း၊ အစိုးရနှင့်ပုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍတို့မှ အချိုးကျထည့်ဝင်မှုများဖြင့် ရန်ပုံငွေထားရှိကာ နိုင်ငံတကာတွင် ကျင့်သုံးနေသည့် စနစ်များအတိုင်း ချေးငွေများထုတ်ချေးနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။
Address : အမွတ္ ၆၂၇/၆၃၅၊ ကုန္သည္လမ္း၊ ရန္ကုန္။
Phone : (၉၅-၁) ၃၇၉၆၉၆၊ ၂၅၂၃၇၃၊ ၂၅၂၄၃၄။
Fax : (၀၉၅-၁) ၂၅၀၂၇၅၊ ၃၈၇၂၄၇။
E-mail MYANMARINS@mptmail.net.mm, MMINSURANCE@mptmail.com.mm
ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး	- ၃၇၉၆၉၆၊ ၂၅၆၂၄၄
အထွေထွေမန်နေဂျာ	- ၂၅၂၃၇၃၊ ၂၅၂၄၃၄
ဒုတိယအထွေထွေမန်နေဂျာ	- ၃၈၄၈၈၂
ဒုတိယအထွေထွေမန်နေဂျာ	- ၂၅၁၇၆၀
ဒုတိယအထွေထွေမန်နေဂျာ	- ၂၅၂၃၇၁
( ရေ-လေ၊ အသက်)
လက်ထောက်အထွေထွေမန်နေဂျာ	- ၃၇၉၆၇၇
လက်ထောက်အထွေထွေမန်နေဂျာ	- ၂၅၀၂၇၅
လက်ထောက်အထွေထွေမန်နေဂျာ	- ၂၅၁၇၆၂
လက်ထောက်အထွေထွေမန်နေဂျာ	- ၃၈၄၈၈၀
( ရေ-လေ၊ ၊ IRD)
လက်ထောက်အထွေထွေမန်နေဂျာ	- ၃၈၄၈၆၇
စီမံရေးရာဌာန	- ၃၇၉၀၈၈၊ ၃၈၄၈၆၅၊ ၂၅၂၃၇၂၊ ၂၄၆၉၀၂
အသက်အာမခံဌာန	- ၃၈၄၈၈၁၊ ၃၈၄၈၇၆
မီး-အင်ဂျင်နီယာနှင့်အမျိုးမျိုးအာမခံဌာန	- ၂၅၁၇၆၄၊ ၃၈၄၈၇၄၊ ၃၈၄၈၆၇
ရေကြောင်း၊ လေကြောင်းနှင့် ခရီးသွားအာမခံဌာန	- ၂၅၁၇၆၁
သူတစ်ပါးထိခိုက်မှုအာမခံဌာန	- ၃၈၄၈၆၄၊ ၃၈၄၈၇၃
ငွေစာရင်းဌာန	- ၃၈၄၈၇၀၊ ၃၈၄၈၆၈
တာဝန်မှူးရုံးခန်း	- ၃၇၉၁၈၈
© 2017 Myanma Insurance. All Rights Reserved. Empovered by Novel Idea.